सयाैँ वर्षपछि श्रावण महिनामा अद्भुत’ संयोग, ४ राशिलाई हुनेछ फाइदा ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/सयाैँ वर्षपछि श्रावण महिनामा अद्भुत’ संयोग, ४ राशिलाई हुनेछ फाइदा !
सयाैँ वर्षपछि श्रावण महिनामा अद्भुत’ संयोग, ४ राशिलाई हुनेछ फाइदा !
साउन महिनालाई पवित्र महिनाका रूपमा लिने सनातन परम्परा छ । हरिशयनी अर्थात् आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि हरिबोधिनी अर्थात् कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्मको चार महिने अवधिलाई चतुर्मास भनिन्छ ।श्रावण शब्द श्रवणबाट बनेको हो जसको अर्थ हुन्छ सुन्नु अर्थात् सुनेर धर्मको मर्म बुझ्नु । सनातन धर्मको प्रमुख ग्रन्थ वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ । श्रुतिको अर्थ नै त्यस्तो ज्ञान हो जुन ईश्वरबाट सुनेर ऋषिहरूले आम मानिसलाई सुनाए ।
त्यसैले श्रावण अर्थात् साउन महिनालाई पवित्र मानिएको हो ।श्रवण नक्षत्र तथा सोमवारलाई भगवान् शिवको पि्रय महिना मानिन्छ । त्यसैले यो महिनामा शिवलाई खुसी पार्न विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं रुद्राभिषेकका साथै सोमवारका दिन व्रत बस्ने गरिन्छ ।साउन महिनाका सबै दिन उत्तिकै पवित्र हुने भए पनि सोमबारलाई अझ विशेष मान्ने चलन छ । यसबाहेक साउनमा नागपञ्चमी, मंगलचौथी, घण्टाकर्ण चतुर्दशी, जनैपूणिर्मा, गाईजात्रा आदि पर्व पर्छन् ।
५ सय ५८ वर्षपछि श्रावण महिनामा यस्तो संयोग- ज्योतिषहरुका अनुसार सयौ वर्षपछि श्रावणमा अद्भु’त संयोग बनेको छ । श्रावण महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछि ४ वटा ग्रहको वक्र योग परेको छ । श्रावण महिनामा योपटक गुरु, शनि, राहु तथा केतुको बक्र परेको छ । अर्थात यी ग्रहहरुको चाल उल्टो हुनेछ ।
मनमोहन अस्पतालको आकस्मिक कक्षमै ग्याङ फाइट, यस्तो छ कारण
आज २०७७ साउन ९ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-